प्रचण्डलाई अचानक विप्लवमाथि किन दया लाग्यो ? « Today Khabar
प्रचण्डलाई अचानक विप्लवमाथि किन दया लाग्यो ?
प्रकाशित ३० फाल्गुन २०७५, बिहीबार १७:०८
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विप्लव समूहका नेताहरुलाई देखेर दया लागेको बताएका छन् ।
सरकारले नेकपा विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि पहिलो पटक प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चबाट विप्लवबारे बोलेका छन् । तर, प्रतिबन्धबारे केही भनेनन् ।
राम्रोसँग सोच्नुस्, यो ७५ साल हो
राज्यले संविधान कानूनसार काम गर्ने भन्दै प्रचण्डले परिस्थितिलाई ठीक ढंगले मूल्यांकन गर्न र एकचोटी निधार खुम्च्याएर सोच्न आग्रह गरे । ‘अर्को प्रचण्ड बन्छु भन्दै हिँडेको सुनेको छु, यो सजिलो छैन । केही गर्नुछ भने नयाँ बाटो खोज्नुस्’ उनले भने । # अनलाइन खबरबाट